Waysha Gawrac Dibigu ha ku Quus Qaatee, Somaliya Wehelkeedu waa Waddaad Wadani ah – Rasaasa News
Jun 19, 2009 ethiopia, Kenya, somalia, Wadani, Waddaad
Sidda ay Itobiya iyo Kenya Faraha Ugula Jiraan Somaliya Waxaa Daliil u ah Kulanka Deg Deg ah ee ay ka Yeesheen Ismiidaamintii ka dhacday Magaalada Balad weyne, Somaliya.
Wararka ka imanaya Magalaada B/weyne ee dalka Somaliya ayaa waxaa ay sheegayaan in Qarixi shalay ka dhacay B/weyne ay ku dhinteen 8 sarkaa oo Itobiyaan ah iyo nin hore ugu shaqayn jiray Kililka, wakiilna in badan Itobiya uga ahaa gaballada Puntlan Somaliya.
Saraakiishan oo sida la sheegay shir kula jiray Odayaasha iyo masuuliyiinta ka Socda Dawlada Ku Meel gaadhka ah ee Somaliya oo uu ugu horeeyo Cumar Xaashi Aadan iyo wiilkii Safaariirkii Abdulahi Yuusuf u joogi jiray Addis Ababa C/kariin Laqanyo. Waxay Saraakiisha Itobiya kala halayeen Odayaasha iyo Masuuliyiinta lee,eday sidii ay u uruurin lahaayeen ciidamo beeleed oo xoog leh, si loo siiyo tababar deg deg ah.
Waxaa kale oo ay kala hadlayeen ay helaan ciidan beeleed loogu talo galay in ay ugaadhsadaan dadka ka soo horjeeda Dawlada Itobiya ee ay ugu horeyso, Jabahada, S/Galbeed, S/Ogadeeniya iyo ururada ka soo horjeeda xukuumada Somaliya.
Waxaa kale oo ay dawlada Itobiya iyo ciidamadeedu maalmihii ugu dambeeyey gudaha u galeen Gabalada Bakool, Gado iyo Galguduud ee Somaliya, oo ay si xoog leh oo aan qarsoodi ahayn ugu jiraan. Waxaa ay qorshaynayaan in ay abuuraan dad si xoog leh ugu xidhan oo Somali ah oo ay u adeegsadaan in ay ku laayaan, masuuliyiinta ururada diimeed ee sida xooga leh uga soo horjeeda siyaasadeeda iyo waliba in la laayo madaxda dawlada ku meel gaadhka ah ee iyaga laftigoodu aan jeclayn sida ay Itobiya faraha ugula jirto arimaha Somaliya. Masuuliyiinta ay doonayso in ay dadban u disho iyada oo adeegsanaysa dad Somali ah, ayaa waxaa ugu horeeya Wasiirka Gaashaandhiga ee Somaliya Maxamed Cabdi Gaandhi, Sheekh Dahir Aways oo isaga ay ka yaaban tahay in uu noqdo hogaan adag oo mideeya ummada Somaliyeed khatarna ku keeni doona xukuumada Itobiya iyo Masuuliyiin kale oo labada dhinac ah.
Xukuumada Itobiya oo si toos ah faraha ugula jirta arimaha Somaliya tan iyo intii ay dhacday xukuumadaii dhexe ee Somaliya, ayaa waxay taageero ka haysataa dalalka reer galbeedka oo iyaga laftigoodu ku siyaasad ah Itobiya.
Xukuumada Kenya oo iyada laftigeedu si aan la fahmi karin ugu gudo jirta arimaha Somaliya ayaa ah halbowlaha ay reer galbeedku dhaqaalaha u soo mariyaan burburinta Somaliya.
Somaliya sida ay qorayaan dadka ku xeel dheer arimaha colaadaha sokeeye, ayaa waxay saadaalinayaan in dhibaatada somaliya ay soo xidhmi karto kolka ay faraha kala baxaan dalalka shisheeye, loona daayo shuurbixinteeda culimada wadaniyiinta ah ee somaliya, ee uu ugu horeeyo 2Xasan iyo dadka la socda, waxaase suurto gal ah in la dilo inta ayna suurto gal noqonin in ay mideeyaan ummada Somaliyeed.
Waxaa walaac xoog leh galinaya dalalka Kenya iyo Itobiya qaraxyada is miidaaminta ah ee ay samaynayaan wadaniyiinta Somaliyeed oo aan iyagu haysanin wax kale oo ay isku difaacaan si ay dalkooda uga difaacaan dalalka dariska iyo kuwa soo gaalmaynaya oo kuligood doonay in ay qaybiyaan Somaliya ayna ka sameeyaan xukuumado la mid ah Somalilan iyo Puntland.
Dalalka Darisku waxay hada iyo wixii ka dambeeya cabsi wayn ka qabaan in dalalkooda ay ka bilaabato qalalaase iyo is qarxin lagu hoobto, waxaa kale oo ay cabsi ku keeni saraakiishoodii sida ay doonaan u dhex socon jiray dalka Somaliya.